By သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း 30 July 2012
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကျွန်းပင် ခုတ်လှဲခြင်းမပြုဘဲ ရာနှုန်းပြည့် ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း တိုင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဌာနက ပြောသည်။
မြန်မာ့သစ်တောများအတွင်းမှ ထွက်သည့် သစ်မာများ (ဓာတ်ပုံ – နိရဉ္စရာ)
“ကျွန်းသစ်ကို ဒီနှစ်ကစပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချပါပြီ။ ဧရာဝတီတိုင်းဆို ဒီနှစ် လုံး၀ ကျွန်းသစ် မထုတ်လုပ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံတော်က အကျိုးစီးပွား ရှာတဲ့အခါမှာ အညိုရောင် စီးပွားရေးကနေ စိမ်းလန်းသော စီးပွားရေးစနစ်ကို သွားနေပါတယ်။ ဒါက ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ သဘောပါ” ဟု ဧရာဝတီတိုင်း သစ်တောဌာနမှ အကြီးတန်းအရာရှိတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ – ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ကျွန်းပင် ၁၄၀ ခုတ်လှဲ ထုတ်လုပ်ခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် တပင်မှ ခုတ်လှဲခြင်းမပြုဘဲ ရာနှုန်းပြည့် ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ အထိ ၅ နှစ်တာကာလတွင် ကျွန်းပင်ပေါင်း ၁၁၂၄ ပင် ခုတ်လှဲထုတ်လုပ် ခဲ့သည်။ အပင်အများဆုံး ခုတ်လှဲခဲ့သည့်ခုနှစ်မှာ ၂၀၀၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြစ်ပြီး ကျွန်းပင်ပေါင်း ၃၅၁ ပင် ခုတ်လှဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းမှ ကျွန်းသစ်ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချခဲ့သော်လည်း သစ်မာကိုမူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ရန် လျာထားပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် သစ်မာပင် ၂၆၉၄၁ ပင် ခုတ်လှဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ပုသိမ်မြို့နယ် တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းနှင့် ဟင်္သာတမြို့နယ်အတွင်းရှိ သစ်တော လုပ်ကွက်များမှ အပင် ၃၉၉၉၉ ပင် (၃၇၈၀၀ တန်) ထုတ်လုပ်ရန် လျာထားသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် သစ်တောကြိုးဝိုင်း ၃၅ ခု ရှိပြီး ဧကအားဖြင့် ၁ ၇၇၈ ၈၅၆ ဧက ရှိကာ တိုင်းဒေသကြီး တခုလုံး၏ ၂၀. ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သစ်တောဖုံးလွှမ်း ဧရိယာဖြစ်ကြောင်း တိုင်းသစ်တောဌာန၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စာရင်းများအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး၏ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ပမာဏသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံ ဧရိယာ ၄၆. ၉၆ ရာခိုင်နှုန်း ၁၂၂၆၇၇ စတုရန်းမိုင် ရှိကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်အတွင်း သစ်အများဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး တွင်လည်း ကျွန်းသစ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချ ထုတ်လုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သစ်တော ဦးစီးဌာနကို ကိုးကား၍ MRTV4 သတင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။